कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति सुशील कोइराला गृह जिल्ला बाँकेमै कमजोर देखिएका छन् - koselihk
कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति सुशील कोइराला गृह जिल्ला बाँकेमै कमजोर देखिएका छन्
Posted by koselihk | २४ माघ २०७२, आईतवार ११:२१ | समाचार |0|
नेपाली कांग्रेस १३औं महाधिवेशनअन्र्तगतको जिल्ला क्षेत्रीय अधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले अधिकांश जिल्लामा युवा प्रतिनिधिलाई चयन गरेको छ । कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय सदस्य, सांसद्, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति र पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि पराजित भएका छन् ।
(From left) Nepali Congress President Sushil Koirala, party senior leader Sher Bahadur Deuba and Vice-President Ram Chandra Paudel at the party’s Central Working Committee meeting, in Kathmandu, on Monday, November 2, 2015. Photo: RSS File pic
गृह जिल्लामै कोइराला कमजोर
नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनमा पार्टी सभापति सुशील कोइराला गृह जिल्ला बाँकेमै कमजोर देखिएका छन् । कांग्रेस बाँकेको क्षेत्रीय अधिवेशनको शनिबार मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । क्षेत्रीय सभापतिमा क्षेत्र नम्बर १ मा माधवराम खत्री, २ मा रामचन्द्र मौर्य, ३ मा रमेश गुप्ता र ४ मा नक्की खाँ निर्वाचित भएका छन् । विजयीमध्ये गुप्ता, मौर्य र खाँ संस्थापन पक्षका हुन् भने खत्री देउवा पक्षका हुन् । शुक्रबार भएको निर्वाचनको परिणाम शनिबार बिहान सार्वजनिक भएको थियो । सार्वजनिक भएको मत परिणामअनुसार क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय सभापतिमा खत्री पुनः निर्वाचित भएका हुन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नारायण गौडेल, भानुभक्त भट्टराई, तप्त पौडेल, अमरबहादुर खड्का, हुर्मत न्यौपाने र पूर्ण आचार्यलगायत निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी, क्षेत्र नम्बर २ को सभापतिमा रामचन्द्र मौर्य निवर्तमान सभापति राजकुमार साहुलाई पराजित गर्दै विजयी भएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा लक्ष्मीनारायण शाह, राजकुमार बर्मा, सुदीपनरसिंह राणा, राकेशबहादुर श्रीवास्तव, रिजवान अहमद साह, महिला कोटातर्फ किरण कोइराला र परमेश्वरी पाठक, आदीवासी जनजातितर्फ धनबहादुर गुरुङ्ग र दलिततर्फ जगराना रैदास निर्वाचित निर्वाचित भएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय सभापतिमा रमेश गुप्ता निवर्तमान सभापति सुरेन्द्रनाथ सापकोटालाई पराजित गर्दै विजयी भएका छन । यसैगरी, महाधिवेशन प्र्रतिनिधिमा निरञ्जनसिंह सिजापति, राजितराम पाठक, सुनिलनरसिंह राणा, सुरेन्द्रकुमार हमाल, कमला भट्ट, मोहम्मदी सिद्दिकी, हेमन्त कर्माचार्य, कृष्णसिंह परियार, डा. सुरेशकुमार कनोडिया, निजामुद्दिन अन्सारी निर्वाचित भएका छन् ।
क्षेत्र नम्वर ४ को सभापतिमा प्रकाश शाहीलाई पराजित गर्दै नक्की खाँ विजयी भएका छन् । सचिवमा ज्ञानबहादुर ओली र कोषाध्यक्षमा नरबहादुर खड्का निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मेघराज ओली, खलिल खाँ, देउफल यादव, देवबहादुर खत्री, महेन्द्र मल्ल, युवराज शर्मा, चन्तबहादुर थारू, दुःखीराम लोनिया, ओबिलाल सुनार, चीनमाया कुवँर र झुकमाया जीएम निर्वाचित भएका छन् ।
जिल्ला सभापति पदका दाबेदार चारैजना लक्ष्मीनारायण शाह र किरण कोइराला बाँके निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट निरञ्जनसिंह सिजापति क्षेत्र नं ३ र नारायणप्रसाद गौडेल क्षेत्र नं १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् ।
सिनेकर्मी रोज राणा क्षेत्रीय सभापति
नेपाली कांग्रेस प्युठानको क्षेत्र नम्बर २ को क्षेत्रीय सभापतिमा सिनेकर्मी रोज राणा निर्वाचित भएका छन् । शुक्रबार अबेर प्राप्त मत गणनाको नतिजाअनुसार १ सय ५१ मत ल्याएर राणा सभापति चुनिएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी धु्रव गौतमले ८४ मत पाए । गौतम नेवि संघ प्युठानका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पुराना पाका नेताहरूलाई पछि पार्दै युवा नेताहरू चुनिएका छन् । पूर्वसांसद्, वर्तमान पार्टी जिल्ला सभापति, पूर्वपार्टी सभापति तथा पदाधिकारी, संविधान सभा निर्वाचनका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै युवा नेता प्रतिनिधि छानिएका छन् । खुलातर्फ अमरप्रसाद भण्डारी, विष्णुकुमार गिरी, शिवराज रिजाल, देवेन्द्र बर्मा, प्रमोद पोख्रेल र खिमानसिंह रायमाझी जिल्लाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।
पूर्वसांसद् मुक्तिप्रसाद शर्मा, वर्तमान जिल्ला पार्टी सुवास के.सी., पूर्वपार्टी जिल्ला सभापति श्रीकृष्णप्रपन्न सुवेदी, शालिकराम पण्डित, पूर्वजिल्ला उपसभापति हरिप्रसाद पोख्रेल, पूर्वजिल्ला सचिव श्रीधर गौतमलगायत नेता खुलातर्फ पराजित भएका छन् ।
यस्तै, संविधानसभा निर्वाचन प्युठान क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बनेकी धनलक्ष्मी श्रेष्ठसहित कांग्रेस महिला नेतृलाई पछि पार्दै निमा गिरी र रेस्मा न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । दलिततर्फ भुवन सुनार, जनजातितर्फ देवीराम पुन मगर निर्वाचित भएका छन् भने अल्पसंख्यक प्रतिनिधिमा भीमप्रसाद गौचन सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । २ सय ५० मत खसेकामा आठ मत बदर भएको थियो ।
नुवाकोटमा देउवा पक्षको अग्रता
नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनका लागि भएको क्षेत्रीय अधिवेशनले देउवा पक्ष कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । नेपाली कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र जगदीश्वर नरसिंह केसीको गृह जिल्लामा केसीद्वयका उम्मेदवारले हार बेहोरेका छन् । केसी कांग्रेस र महत कांग्रेसबिचको पुस्तौनी लडाइँ रहेको नुवाकोटमा क्षेत्रीय निर्वाचनबाट डा. रामशरण महतको साथमा उनका भाइ डा. प्रकाशशरण महतको समेत दबदबा बढेको हो ।
क्षेत्रीय अधिवेशनले क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद् बहादुरसिंह लामाको समेत वर्चस्व राखेको छ । जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारको दाबेदार सांसद् तामाङ र डा. प्रकाशशरण महत एक भएर निर्वाचनमा प्यालन खडा गरेपछि केसी पक्षले हार बेहोरेको हो ।
क्षेत्र नम्बर १ मा अर्जुन न्यौपानेको प्यानल विजयी भएको छ । केसीपक्षीय गोविन्द्र थपलियाको प्यानललाई पराजित गराई न्यौपाने प्यालन विजयी भएको छ । क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा महत पक्षबाट ७ जना र केसी पक्षबाट ४ जना विजयी भएका छन् । केसी पक्षबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी, प्रताप लामा र कविराज गुरुङ, सीता मिजार विजयी भएका छन् । महत पक्षबाट ७ जनामा खुलातर्फ रामकृष्ण थापा, कृष्णबहादुर लामा, बद्रीप्रसाद मुडभरी, मञ्जु केसी र सरिता आचार्य र एस के नेपाल र रामबहादुर डंगोल विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत रामबहादुर थापाले बताए ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको क्षेत्र नं. २ मा १ जना सदस्य र १ जना महाधिवेशशन प्रतिनिधिबाहेक अरू सबै पदमा महत पक्ष नै विजयी भएको छ । सभापतिमा धुव्र श्रेष्ठ, विजयी भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अर्जुननरसिंह केसीका भाइ डा. केदारनरसिंह केसीबाहेक अरू १० जना महत पक्षबाट विजयी भएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा रमेश महत, शिव अधिकारी, डिल्लीप्रसाद ढकाल, अच्युत गुरागार्इं, शान्तमान तामाङ, वीरबहादुर तामाङ, बिना महत र ईश्वरी उप्रेती, कृष्णप्रसाद मिश्र र कल्पना नेपाली विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत अमरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नुवाकोट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ डा. प्रकाशशरण महत पक्ष हावी भएको छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिमा जगत्बहादुर तामाङको प्यानल विजयी भएको हो ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद् बहादुरसिंह लामा, फैसिङ तामाङ, चोकराज शाक्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ, भरतकुमार खड्का, धुव्र अधिकारी, लालीमाया तामाङ, दलितबाट दिलबहादुर विश्वकर्मा, श्रीराम श्रेष्ठ, यासिबा रहमान विययी भएका छन् । ध्रुव अधिकारीबाहेक अरू सबै महत प्यानलका हुन् । अधिवेशनका लागि महत पक्षबाट रमेश महत र बहादुरसिंह लामामध्ये एक सभापतिको उम्मेदवार बन्नेछन् । क्षेत्रीय अधिवेशनमा नराम्रो झड्का लागेपछि सभापतिमा जगदीश्वरनरसिंह केसी पछि हट्ने संकेत मिलेको कार्यकर्ताको विश्लेषण रहेको छ ।
देउवा दम्पती निर्विरोध चयन
डडेल्धुराबाट कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र पत्नी डा. आरजू राणा देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन् । डडेल्धुरा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएकोले डडेल्धुराबाट १२ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने भएकाले देउवा दम्पती निर्विरोध भएपछि बाँकी १० जनाका लागि २० जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
शनिबारको निर्वाचनमा वर्तमान सभापति कर्णमल्ल प्यानबाट पूर्वमेयर मोहन पाठक, वर्तमान महाधिवेशन प्रतिनिधि तारक बुढाएर, हरिभट्ट, लोकेन्द्र गुरुङ , भोजराज बोहरा, नारुदेवी ओझा, सुरेन्द्र माली, भरत नेपाली, रवीन्द्र खड्का उम्मेदवार रहेका छन् भने पूर्वसभापति रघुवर भट्ट प्यानबाट नैनसिंह महर, गोविन्द बोहरा, भीमबहादुर साउद, शेरबहादुर भण्डारी, कौसिला भट्ट, नरभाव कामि, लोकराज भट्ट उम्मेवदार छन् ।
अरू अधिवेशनमा जस्तै यसपटक पनि वरिष्ठ नेता देउवा र पत्नी डा. आरजु राणालाई एक एक सिट सुरक्षित छोडिएको छ । देउवाकै २ ओटा समूहका बिच शुक्रवार साँझ अबेर भएको उम्मेदवार दर्तामा दुवै नेतालाई सुरक्षित सिट छोडेर अन्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
सांसद् नै पराजित
नेपाली कांग्रेसको १३औं महाधिवेशनका लागि शुक्रबार चितवनमा सम्पन्न प्रतिनिधि छनोटमा कांग्रेसका सांसद्, प्रजातन्त्रका सेनानी, पूर्वजिल्ला सभापतिसमेत पराजित भएका छन् ।
चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवारी दिएका प्रजातन्त्रका सेनानी महेश्वरलाल श्रेष्ठ पराजित भएका छन् । त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद् बनेकी गीता वाग्ले पनि पराजित भएकी छन् । चितवन क्षेत्र नम्बर ४ बाट पूर्वजिल्ला सभापति तोपमानसिंह गुरुङ पराजित भएका छन् ।
यसअघिका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका वामदेव खनाल पनि पराजित भएका छन् । खनाल कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन् । सोही क्षेत्रमा पूर्वमहाधिवेशन प्रतिनिधि केशव कँडेल पनि पराजित भएका छन् । तरुण दल चितवनका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधि छनोटमा पराजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस चितवनका पूर्वउपसभापति ऋषि पाण्डे पनि सो क्षेत्रमा पराजित भएका छन् । जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा प्रतिस्पर्धा गरेका अन्य ६ जना सांसद् भने विजयी भएका छन् ।
यसैगरी, सभापतिको उम्मेदवारी दिने जनाउँदै आएका क्षेत्र नम्बर १ का राजेन्द्र बुर्लाकोटी, २ का जितनारायण श्रेष्ठ, तीनका राजेश्वर खनाल, ४ का टेकप्रसाद गुरुङले चारओटै क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएर जितेका छन् । जिल्लाका पाँच क्षेत्रमा ९ सय १ प्रतिनिधिले महाधिवेशन प्रतिनिधि र क्षेत्रीय सभापतिका लागि मतदान गरेका थिए ।
जसमा क्षेत्र नम्बर १ बाट राजु सिलवाल, २ बाट कुमार कार्की, ३ बाट रमेशप्रसाद अधिकारी, ४ बाट सरिता केसी र ५ बाट लालबहादुर दुवाडी क्षेत्रीय सभापतिमा विजयी भएका छन् । जिल्लाबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुन ६० जनाले अवसर पाएका छन् ।
सबैभन्दा बढी क्षेत्रीय प्रतिनिधि मतदाता रहेको क्षेत्र नम्बर ४ मा पहिलोपटक महिला सभापति बनेकी छन् । वर्तमान जिल्ला कार्यसमिति सदस्य रहेकी सरिता केसीले अत्यधिक मतका साथ क्षेत्रीय सभापति जितेकी हुन् । ६ जना उम्मेदवार रहेको ४ नम्बरमा केसीले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शुम्भ भण्डारीलाई ५० मतान्तरले पराजित गरिन् । २ सय ३४ जना मतदाता रहेको यो क्षेत्रमा केसीले ९८ मत पाउँदा भण्डारीले ४८ मात्रै मत पाए ।
यस क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जिल्ला सभापतिका दाबेदार नेताहरू विजयी भएका छन् । वर्तमान सभापति टेकप्रसाद गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे, विजयराज शर्मा भुसाल, दिनेश कोइराला, जगन्नाथ पौडेल र कृष्णलाल सापकोटा विजयी भएका छन् । त्यस्तै सो क्षेत्रबाट महिलातर्फ उमा रेग्मी र अञ्जनी श्रेष्ठ, दलिततर्फ विष्णुमाया परियार, आदिवासी÷जनजातितर्फ साजनकुमार महतो र मधेसी÷अल्पसंख्यक÷पिछडा वर्ग समुदायबाट जुम्मादिन मिया क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएको निर्वाचन अधिकृत मुक्ति ढकालले जानकारी दिए ।
यस्तै, क्षेत्र नम्बर ३ को सभापतिमा रमेश अधिकारीले बाजी मारेका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ बाट जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिन सक्ने चर्चा गरिएका ३ जना नेताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा विजयी भएका छन् । यस क्षेत्रबाट जिल्ला सभापतिका दाबेदार राजेश्वर खनालले सबैभन्दा बढी भोट पाएका छन् । यस्तै सुबोध प्रधान, ईश्वरीप्रसाद पौडेल र दीर्घमान श्रेष्ठ खुलातर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भए । महिलातर्फ गीता गुरुङ र सिर्जना अधिकारी विजयी हुँदा आदिवासी÷जनजातितर्फ बालकुमार श्रेष्ठ, दलिततर्फ विपेन्द्र रामुदामु तथा मधेसी÷अल्पसंख्यक÷पिछडावर्गबाट इन्द्र भुजेल विजयी भए ।
यस्तै, चितवन क्षेत्र नम्बर १ मा फेरि राजु सिलवाल नै सभापति चयन भएका छन् । यो क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खुलातर्फ राजेन्द्र बुर्लाकोटी, भीमप्रसाद थपलिया, कृष्णप्रसाद सुवेदी, बासुदेव ढुंगाना, राममणि खनाल र लोकराज पाण्डे, महिलातर्फ सावित्री बोगटी र सुशीला उप्रेती, आदिवासी÷जनजातितर्फ चन्द्रविक्रम चौधरी, दलिततर्फ भगतसिंह सुनार र मधेसी÷अल्पसंख्यक÷पिछडावर्ग समुदायबाट गोविन्द चेपाङ निर्वाचित भएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा कुमार कार्कीको प्यानल नै विजयी भएका छन् । यो क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खुल्लातर्फ जितनारायण श्रेष्ठ, शेषनाथ अधिकारी, एकनाथ रानाभाट, कमल आचार्य, विजयराज ओझा र सरोज गुरुङ, महिलातर्फ गीता देवकोटा र सावित्री चौधरी, आदिवासी÷जनजातितर्फ सञ्जय लामा, अल्पसंख्यकबाट नरजंग प्रजा र दलितर्फत सुवर्ण विक निर्वाचित भएका छन् ।
उता, चितवन क्षेत्र नम्बर ५ मा लालप्रसाद दवाडी क्षेत्रीय सभापतिमा विजयी भएका छन् । ५७ मत पाएका उनले ४७ मत ल्याए । दलबहादुर गुरुङले र १८ मात्रै मत पाएका सीपी सुवेदीलाई हराए । सो क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा खुल्लातर्फ पृथ्वीमान गुरुङ, भरत गुरुङ, कैलाश कोइराला, करिप्रसाद पौडेल, छविलाल भट्टराई र मायाराम महतो, महिलातर्फ गीताकुमारी गुरुङ र सविता बराल, आदिवासी÷जनजातितर्फ उमेश श्रेष्ठ, दलिततर्फ बाजीराम परियार र मधेसी÷अल्पसंख्यक÷पिछडा वर्ग समुदायबाट विगुवा साह निर्वाचित भए ।
प्रतिनिधिमा युवाको वर्चस्व
नेपाली का्रगे्रसको १३औं महाधिवेशनका क्रममा जाजरकोटमा शुक्रबार सम्पन्न क्षेत्रीय समिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन निर्वाचनमा युवाको वर्चस्व देखिएको छ । गाउँ नगर तथा वडाको निर्वाचनबाट पछिल्लो पुस्तालाई विस्थापित गर्दै युवा प्रतिनिधि चयन भएका हुन ।
दुईओटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको जाजरकोटमा क्षेत्र नम्बर १ को क्षेत्रीय सभापतिमा महेन्द्रबहादुर शाह, सचिवमा छवि पन्त र कोषाध्यक्षमा रतनकला गिरी निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, २ नम्बर क्षेत्रको सभापतिमा कालीबहादुर खत्री, सचिवमा नरेन्द्र शाही र कोषाध्यक्षमा शोभा शाही निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सभापति सचिव र कोषाध्यक्ष ३० वर्षभन्दा कम उमेरका हुन् ।
यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ का सचिव र कोषाध्यक्ष ३५ वर्षमुनिका निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा क्षेत्र नं. १ बाट खुलातर्फ सनतकुमार कार्की, वेदराज सिंह, मुक्ति आचार्य, बिनबहादुर सिंह, कमल चन्द र दीपकजंग शाह निर्वाचित भएका छन् भने समावेशी कोटातर्फ महिलामा मैना कार्की रावल, चिन्ताकुमारी वाग्ले, जनजातितर्फ शशिराम बुढा, अल्पसंख्यकतर्फ यामबहादुर बस्नेत, दलिततर्फ मोहन विक निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर २ मा खुलातर्फ राजीवविक्रम शाह, इलमबहादुर शाही, खड्गबहादुर बुढा, रत्नबहादुर अधिकारी, जनकबहादुर सिंह र रत्नबहादुर खड्का तथा समावेशीतर्फ (महिला) गीता शाही र सरस्वती रावत, अल्पसंख्यकतर्फ जनक वादी, जनजातितर्फ जनक बुढा र दलिततर्फ धर्म नेपाली निर्वाचित भएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकामध्ये अधिकांश ४० वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । यस्तै, सोमबार हुने जिल्ला अधिवेशनमा पनि युवा आकांक्षी धेरै देखिएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित युवा नेताहरू वेदराज सिंह र इलमबहादुर शाहीले जिल्ला सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छन् ।
पूर्वमा संस्थापन पक्ष बलियो
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सुनसरीबाट संस्थापन पक्ष बलियो देखिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सुनसरीको क्षेत्र नम्बर १, ३, ५ र ६ बाट पूरै संस्थापन पक्षका विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका चार जना र क्षेत्र नम्बर ४ बाट दुईजना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विजयी भएका छन । कांग्रेसको क्षेत्रीय अधिवेशनअन्तर्गत सुनसरी जिल्लाको शुक्रबार सम्पन्न क्षेत्रीय अधिवेशनबाट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट क्षेत्रीय सभापतिमा सुरेशमान श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट क्षेत्रीय सभापतिमा मणिराम श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ बाट सभापतिमा विजयी मणिराम श्रेष्ठ र ४ नम्बरबाट विजयी रामप्रसाद मेहता भने देउवा पक्षका हुन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट क्षेत्रीय अध्यक्षमा मेहदी हुसैन, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट रामप्रसाद मेहता, निर्वाचन क्षेत्र नम्वर ५ बाट अयुब अन्सारी र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट उपेन्द्र कटुवाल क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैबिच नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार अबेर सम्पन्न क्षेत्रीय अधिवेशनमा मोरङका ९ क्षेत्रमध्ये ८ क्षेत्रको निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको छ । मोरङ–१ मा नागेश्वरप्रसाद सिंह सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ को सभापतिमा गणेश खड्का निर्वाचित भएका छन् । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट मोहन कार्की, ४ बाट सुमन कुँवर, ५ बाट दिलीप पोखरेल, ६ बाट विनोद बस्नेत, ७ बाट निरञ्जन रिजाल, ९ बाट खड्ग फागो निर्वाचित बनेका छन् ।
पाल्पामा देउवा पक्षकै वर्चस्व
नेपाली कांग्रेस पाल्पाको क्षेत्रीय अधिवेशनमा तिनओटै निर्वाचन क्षेत्रमा शेरबहादुर देउवा पक्षधरको वर्चस्व देखिएको छ । १३औं महाधिवेशनमा भाग लिने अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधी देउवा पक्षधर विजयी भएका छन् । वर्तमान पार्टी सभापति वीरबहादुर राना र सांसद् हरि नेपालबिच कार्यगत एकता भएपछि देउवापक्षधर बलियो बनेको हो ।
संस्थापन पक्षबाट देखिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमा क्षेत्र नम्बर १ एकबाट ज्ञानबाहदुर गाहा, क्षेत्र नम्बर ३ बाट हिमालदत्त श्रेष्ठले मात्रै जितेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा सन्तोष थापा सभापति, सचिवमा ज्ञानप्रसाद अर्याल, कोषाध्यक्षमा खमबहादुर सोमै निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जनजातितर्फ रामप्रसाद श्रेष्ठ, खुला ६ सिट मध्ये रमणबहादुर थापा, देवराज ढकाल, दानबहादुर पछाई, विजयराज घिमिरे, ज्ञानबहादुर गाहा, लक्ष्मण बस्याल निर्वाचित भएका छन् । महिलातर्फ विष्णुमाया भट्टराई ढकाल र रूपा विक, दलिततर्फ अर्जुन विक र अल्पसंख्यकमा हजिलदिन मियाँ विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ को सभापतिमा कृष्णप्रसाद बस्याल, सचिवमा धातानन्द बस्याल, कोषाध्यक्षमा विष्णु गाहा निर्वाचित भएका छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि खुलातर्फ वीरबहादुर राना, यमलाल तिमिल्सेना, झपेन्द्र गैरे, केशवराज शर्मा, विष्णुहरि आचार्य, कृष्णबहादुर राना विजयी भए । महिला खुलातर्फ सुनिता अधिकारी र बसन्ती घिमिरे, आदिवासी जनजातितर्फ जुद्धबहादुर थापा, दलिततर्फ विष्णुबहादुर बमरेल र अल्पसंख्यकमा जिराबहादुर कुमाल निवार्चित भए ।
क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय सभापतिमा रामबहादुर कार्की, सचिवमा अशोक घिमिरे, कोषाध्यक्ष प्रदीप उदय निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा विमल ढकाल, अजयमान कर्माचार्य, देवी भट्टराई, मेघराज पौडेल, हिमालदत्त श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । जनजातितर्फ नलबहादुर राना, दलितमा भरत परियार, अल्पसंख्यकमा जंगबहादुर केसी, महिलातर्फ सीता नेपाल र जमिला मिया निर्वाचित भएका छन् ।
कञ्चनपुरमा देउवा पक्ष हावी
कञ्चनपुरका चारओटै निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रिय अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । क्षेत्रीय अधिवेशनबाट क्षेत्रीय सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष चयन भएका छन् । यस्तै, अधिवेशनले खुलातर्फ ६ जना, महिलातर्फ दुईजना, तथा दलित, आदिवासी जनजाति, अपांगतातर्फ एक÷एकजना गरी ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा संस्थापन पक्षका गोपी उपाध्याय देउवा पक्षका अमरजन साउदलाई पराजित गर्दै सभापतिमा चयन भएका छन् । १ नम्बरबाट खुलातर्फ सांसद् दिवानसिंह विष्ट, चन्द्रबहादुर सिंह, हरेन्द्र विष्ट, भीमबहादुर थापा, भरतबहादुर विष्ट, बिन्दु श्रेष्ठ महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, महिलातर्फ कृष्णा गिरी र पार्वती थापा, दलिततर्फ चन्द्रसिंह विक, आदिवासी जाजातितर्फ बन्धु राना र अपांग, अल्पसंख्यकतर्फ लोकबहादुर रावत महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा देउवापक्षधर सिद्धराज भट्टलाई झिनो मतअन्तरले पराजित गर्दै चिन्तामणि भट्ट फेरि क्षेत्रीय सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नम्बर २ बाट खुलातर्फ गोपाल गुरुङ, हेमराज ओझा, लालबहादुर सिंह, देवराज पाठक, दुर्गाप्रसाद भट्ट, नवराज जोशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । महिलातर्फ कल्पना पन्त र पार्वती महता, दलिततर्फ शेरबहादुर विश्वकर्मा, जनजातितर्फ झेली राना तथा अपांग, अल्पसंख्यकतर्फ विष्णुराज भट्ट विजयी भएका छन् ।
त्यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को क्षेत्रीय सभापतिमा देउवापक्षीय दलबहादुर बोहोरा दोहोरिएका छन् । क्षेत्र नम्बर ३ बाट खुलातर्फ सांसद् बहादुरसिंह थापा, हरिप्रसाद बोहरा, सांसद् बलदेव बोहरा, पदम बोगटी, भोजराज बोहरा र नरेन्द्रसिंह भण्डारी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । महिलातर्फ शारदा चन्द र कल्पना केसी, दलिततर्फ हरिहर परियार, जनजातितर्फ लालबहादुर राना तथा अपांग, अल्पसंख्यकतर्फ उपेन्द्र खडायत निर्वाचिन भएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ को क्षेत्रीय अधिवेशनबाट सभापतिमा गोपालदत्त भट्ट निर्विरोध चयन भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट खुलातर्फ पूर्वमन्त्री तथा सांसद् रमेश लेखक, वीरबहादुर सुनार, यज्ञराज जोशी, खगेश्वर बोहरा, कृष्ण पनेरु, दुर्गाप्रसाद जोशी निर्वाचित भएका छन् । यस्तै, महिलातर्फ मधु भारती र सुनिता भाट, दलिततर्फ रमेश दयाल, जनजातितर्फ बेलबहादुर राना र अपांग, अल्पसंख्यकतर्फ दिवाकर पाण्डेय निर्वाचित भएका छन् ।
कैलालीका दुईओटा क्षेत्रमा संस्थापन
नेपाली कांग्रेस १३औं महाधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार सुदूरपश्चिममा सम्पन्न क्षेत्रीय अधिवेशनको निर्वाचनमा अधिकांश स्थानमा देउवा पक्षधर निर्वाचित भएका छन् । सुदूरपश्चिमका २१ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १५ क्षेत्रमा सहमति र निर्वाचनमार्फत क्षेत्रीय समिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएकामा देउवा पक्षको ठूलो बहुमत छ । सार्वजनिक मत परिणामअनुसार कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ५ र ६, कञ्चनपुरको २, ४ र बझाङ–१ मा देउवापक्षको एकलौटी रहेको छ भने कैलाली–२ मा संस्थापनको एकलौटी छ ।
कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३, कञ्चनपुर–१ मा संस्थापन तथा कञ्चनपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा देउवा पक्षको बहुमत छ । कैलालीका ६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १, ५ र ६ मा देउवा पक्ष एकलौटी विजयी भएको छ भने २ मा संस्थापन एकलौटी पक्ष विजयी भएको छ । क्षेत्र नम्बर–३ मा अधिकांश पदमा संस्थापन पक्ष विजयी भएका छन् भने ४ मा अधिकांश देउवा पक्षका पदाधिकारी र महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । कैलाली क्षेत्र नम्बर ६ को अधिवेशनबाट सभापतिमा हरिश खड्का निर्विरोध चयन भएका छन् । पुष्करनाथ ओझा, उत्तम कठायत, कृष्णबहादुर महरा, नरनारायण शाह ‘मनु’, आनन्दराज जोशी, नारायणदत्त भट्ट खुला तर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । जनजातितर्फ प्यारेलाल राना, दलिततर्फ टेकबहादुर रैका, मधेसीतर्फ बब्लुकुमार चौधरी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका हुन् । यसैगरी, महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि महिलातर्फ भएको निर्वाचनमा पुष्पा भट्ट र रत्ना मल्ल निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा गौरी लामा र सुशीला भट्ट पराजित भए ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ को देउवा पक्षकै दुई प्यानलबिच निर्वाचन भएको छ । क्षेत्रीय सभापतिमा दिनेशराज जोशी विजयी भएका छन् । प्रतिद्वन्द्वी सुरतबहादुर कार्कीलाई ७ मतले पराजित गर्दै जोशी विजयी भएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा वीरेन्द्र भट्ट, खडगसिंह बडैला, डाक्टर लक्ष्मीराज पाठक, रामचन्द्र ओझा, पदमराज भट्ट र रामचन्द्र ओझा ‘ख’ विजयी भएका छन् । महिला प्रतिनिधिमा गोमा केसी, वसन्ती ओझा, दलिततर्फ गंगाराम कामी, आदिवासी जनजातितर्फ फिरुराम राना र अपांगतर्फ गोपाल देउवा विजयी भएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर ४ मा पनि देउवा पक्षका खेम चौधरी सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिद्वन्द्वी संस्थापन पक्षका पदम कँडेललाई पराजित गर्दै चौधरी सभापतिमा विजयी भएका हुन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा १२ मध्ये १० देउवा र २ संस्थापन पक्षका विजयी भएका छन् । देउवा पक्षका टेकराज जोशी, भीम बडुवाल, मोहनराज मल्ल, लक्ष्मीराज जोशी तथा संस्थापन पक्षका गोविन्दराज जोशी र गणेश देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । महिलाबाट कलावतीदेवी शाह, रिताकुमारी चौधरी, दलितबाट नरसिंह पार्की, जनजातिबाट चेतराज श्रेष्ठ, मधेसी÷अल्पसंख्यकबाट जीतबहादुर राना रहेका छन् ।
कांग्रेसका हस्तीहरू नै पराजित
काग्रेसको १३औं महाधिवेशनअन्तर्गत सुनसरीमा भएको गाउँ, नगर र क्षेत्रीय अबिधेसनबाट केही प्रभावशाली नेता पराजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुनसरीका पूर्वजिल्ला सभापति हरिनाथ बाँस्तोला माहाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । तरुण दलका अध्यक्ष सिजन गुरुङबाहेक अधिकांश भातृ संस्थाका अध्यक्ष पनि पराजित भएका छन् । नेविसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रसुन्दर खेवाङ धरानबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमै पराजित भएका छन । किसान संघका सभापति विष्णु डाँगी २ नम्बर क्षेत्रको क्षेत्रिय सभापतिमा पराजित भएका छन् । महीला संघ सुनसरीकी अध्यक्ष विजया कटुवाल महाधिवेशन प्रतिनिधि महिला संघकै इटहरी नगर सभापति गीता श्रेष्ठसँग पराजित भएकी छन् । ट्रेड युनियन कांग्रेसका पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष ज्योति कोइराला इटहरी–८ बाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि छनोटमै पराजित भएका छन् । ट्रेड युनियन काग्रेसकै महीला उपाध्यक्ष पन्छी वाइवा माहाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएकी छन् ।
नेविसंघका अधिंकाश पूर्व जिल्ला सभापति पनि पराजित भएका छन् । पूर्वजिल्ला सभापति विकास आचार्य क्षेत्र नम्बर १ बाट माहाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । अर्का पूर्वसभापति तथा माहासमिति सदस्य वीरेन्द्र कार्की पनि माहाधिवेशन प्रतिनिधिमै पराजित भएका छन । अर्का पूर्वजिल्ला सभापति विकास केसी पनि इटहरी नगर सभापतिमा पराजित भएका छन् । नेविसंघकै पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दीपेन्द्र केसी पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् ।
यस्तै, इटहरीका युवा दीपक गौतमले क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा इटहरी वडा नम्बर १ बाट अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएका थिए तर शुक्रबार भएको २ नम्बर क्षेत्रको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । यस्तै, सुनसरी कांग्रेसमा निकै महŒवपूर्ण व्यक्ति मानिएका यसअघिका महासमिति सदस्य दिलकुमार बन पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनावमा पराजित भएका छन् ।
यसैगरि दिनेशचन्द्र गिरी, हासपोसा कांग्रेसका सभापति मछिन्द्र खवाससमेत महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । यस्तै, युवा नेता नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य मुकेश खड्का पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पराजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका पूर्व इटहरी नगरसभापति जीवनाथ काफ्ले शुक्रबारको महाधिवेशन प्रतिनिधिको चुनावमा पराजित भएका छन् । पूर्व महासमिति सदस्य महेश बाँस्तोला पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा पराजित भएका छन् ।
इलामबाट बढारिए देउवा पक्षधर
शनिबार सम्पन्न नेपाली कांग्रेस इलामको क्षेत्रीय अधिवेशनबाट इलाममा देउवा पक्षधर बढारिएका छन् । इलामबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिने ३६ मध्ये ३ प्रतिनिधि शेरबहादुर देउवा पक्षधर छन् । देउवा पक्षका केशव थापा, डम्बर खड्का र चन्दा कार्की मात्रै निर्वाचित भएका छन् ।
गाउँ र क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइसक्दा जिल्लाका तीनओटै निर्वाचन क्षेत्रमा संस्थापन पक्षकै क्षेत्रीय सभापति निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ र २ मा भने निर्वाचित सबै प्रतिनिधि संस्थापन पक्षका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर –१ मा दुर्गा बराल, २ मा गोविन्द गिरी र ३ मा नूतनदेव दुलाल सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रीय सभापति बरालसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू बेनुपराज प्रसाईं, टीकाराम लाप्चा, प्रेमलाल राई, दीपक अधिकारी, नरबहादुर सुवेदी, उद्धव पौडेल, बुद्धकाजी लाप्चा, धनकुमार आले, वन्दना अधिकारी, उर्वशी गौतम र दीपक खत्री संस्थापनकै छन् ।
क्षेत्र नम्बर २ मा पनि सभापति गिरीसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू भेषराज आचार्य, पूर्ण गौतम, हरिप्रसाद खनाल, नगेन्द्र कुमाल, डिकेन्द्र इदिङ्गो, राजेन्द्र बाँस्तोला, खगेन्द्र देवान, विष्णु दाहाल, चन्द्रमाया लिम्बू, मनकुमार श्रेष्ठ र गोविन्द सेन्चुरी संस्थापनबाटै निर्वाचित भए ।
क्षेत्र नम्बर ३ मा सभापति दुलालसहित महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू हिमालय कर्माचार्य, केदार थापा, तोय
sources: राजधानी जिल्ला ब्युरो
Previousझापा जिल्लामा सात हजार ६५० जना कुष्ठरोगी
NextNepali movie actress express grief and solidarity to the young girl Yoruna Pun who was raped and killed
सामुन्द्रिक आधीले २ तले घर र मान्छे उड़ायो नत्र हेर्नुहोस!
१८ श्रावण २०७३, मंगलवार १५:२२
१ आश्विन २०७५, सोमबार १८:१०
५ पुष २०७३, मंगलवार २१:४४
जुगु घटनाका आरोपी पूर्वराज्यमन्त्रीसहित ४० जनालाई ज्यान मुद्दा
२२ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०८:३६